मृत्युबिन्दु दर्शनको बारेमा हामी के थाहा छ?
by स्टीफन वाग्नेर
के मरिरहेका व्यक्तिहरूले मायालु मानिसहरूको अर्को पक्षलाई खारेज गरे?
मृत्युको क्षण नजिक, मृतक मित्रहरू र प्रियजनहरूको प्रतीकहरू अर्को पक्षमा मृत्यु भएको अनुभूति देखा पर्छन्। यस्तो मृत्युदण्ड दर्शनहरू मात्र कथाहरू र चलचित्रहरूको सामान होइनन्। तिनीहरू वास्तवमा, तपाई भन्दा सोच्नु भन्दा बढी सामान्य हो र आश्चर्यजनक रूपमा राष्ट्रीयताहरू, धर्महरू र संस्कृतिहरूमा समान छन्। यी अपरिचित दृश्यहरूको उदाहरणहरू इतिहासमा रेकर्ड गरिएको छ र मृत्यु पछि जीवनको सबैभन्दा शक्तिशाली प्रमाणहरूको रूपमा खडा हुन्छ।
Deathbed दर्शनहरूको अध्ययन
मृत्युबिन्दु दर्शनका अनुयायीहरूले उमेर र उमेरमा साहित्य र जीवनीमा देखाएका छन्, तर यो 20 औं शताब्दीसम्मको विषय थिएन जुन विषयले वैज्ञानिक अध्ययन प्राप्त गर्यो। विषयलाई गम्भीरतापूर्वक जाँच गर्न पहिलो थियो सर विलियम ब्रेट्ट, डब्लुईएनएनको रयल कलेज अफ फिजिकिक्स को प्रोफेसर। 1926 मा उनले आफ्नो निष्कर्षों को सारांश "बुक डाउंड विजन्स" पुस्तक मा प्रकाशित गरे। धेरै अवस्थामा तिनले अध्ययन गरे, तिनले अनुभवको केहि रोचक पक्ष पत्ता लगाए जुन सजिलै व्याख्या गरेनन:
मर्नु भएको व्यक्तिको लागि यो असामान्य थिएन जुन यी दर्शनहरू मित्र र आफन्तहरू चिनेका छन् जसले सोचेका छन् अझै पनि जीवित छन्। तर हर मामला मा, बैरेट को अनुसार, पछि यो पत्ता लगाइएको थियो कि यिनी मान्छे वास्तव मा मृत थिए। (सम्झनुहोस्, संचारहरू आज तिनीहरूले के हुन् भन्ने थिएनन्, र यसले एक मित्र वा एक जना मायालु मृत्यु भएको छ भनेर जान्न हप्ता वा पनि महिना लाग्न सक्छ।)
बेरेटले यो उत्सव पत्ता लगाए कि बच्चाहरु प्राय: प्रायः आश्चर्य व्यक्त गर्थे कि "स्वर्गदूतहरूले" उनीहरूको मृत्युको क्षणमा देखे पखेटा थिएनन्। यदि मृतक भिजुरी मात्र एक छुटकारा छ भने, बच्चाले एक स्वर्गदूतलाई देख्न सकेन किनकि प्रायः प्रायः कला र साहित्यमा चित्रित हुन्छ - ठूलो, सेतो पखेटा संग?
यी रहस्यमय दृश्यहरूमा थप व्यापक अनुसन्धान 1960 र 1970 मा मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानका लागी अमेरिकन सोसाइटीका डा। कार्लिस ओसिसले गरे।
यस शोधमा, र पुस्तकको लागि उहाँले "द हेट डेभमा" शीर्षकमा 1977 मा प्रकाशित "ओएसिसले हजारौं मामला अध्ययन गरे र 1,000 जना डाक्टरहरू, नर्सहरू र अरूलाई मर्नु भएको कुरा साक्षात्कार गरे। कामले धेरै आकर्षक स्थिरताहरू फेला पारेको छ:
यद्यपि केही मर्दा व्यक्तिहरूले स्वर्गदूत र अन्य धार्मिक व्यक्तिहरूलाई (र कहिले काँही पनि पनि पार्थिव पात्र) देखेर रिपोर्ट गर्दछन्, प्रायः अधिकांश व्यक्ति परिचित व्यक्तिहरू हेर्नको लागी जुन पहिले बितिसकेको थियो।
प्रायः, ती दर्शनहरूमा देखाएका मित्र र आफन्तहरूले सीधा व्यक्त गर्छन् कि उनीहरूलाई उनीहरूलाई हटाउन मद्दत पुर्याए।
मर्नुको अनुभव अनुभवले आश्वस्त छ र दर्शनको साथमा ठूलो आनन्द व्यक्त गर्दछ। यो भ्रम वा डराउँछ कि एक गैर-मर्दा व्यक्तिले "भूत" हेर्नको अनुभव अनुभव गर्दछ। मरिसकेका यी उदाहरणहरूसँग जान्न निकै मनपर्छ।
मर्नु भएको व्यक्तिको मनोभाव - स्वास्थ्यको अवस्था पनि - परिवर्तन गर्न देखिन्छ। यी दर्शनको समयमा उदास वा दुखाइमा एकपटक व्यक्तिले एलायनको साथ पराजित गर्दछ र क्षणिक रूपमा दुखाइबाट निस्केको हुन्छ ... मृत्यु हुने बेला सम्म।
यी अनुभवकर्ताहरू हर्षित हुन वा चेतनाको बदलिएको अवस्थामा देखा पर्दैन। बरु, तिनीहरू आफ्नो वास्तविक वातावरण र अवस्थाहरूबारे राम्ररी सजग हुन्छन्।
मरिसकेका व्यक्तिले पछिल्ला जीवनमा विश्वास गर्दैन कि अप्रासंगिक छ; अनुभव र प्रतिक्रियाहरू समान छन्।
मृतबेडहरू तथ्य वा काल्पनिक हुन्?
कतिजना मानिसहरु लाई मृत्युदण्ड को दर्शन छ? यो अज्ञात छ किनकी लगभग 10 प्रतिशत मृत व्यक्तिहरू उनीहरूको मृत्यु भन्दा चाँडै नै होशियार छन्। तर यस 10 प्रतिशतले अनुमान लगाएको छ, 50 र 60 प्रतिशत बीचका यी दर्शनहरू अनुभव गर्छन्। दर्शनहरू केवल पाँच मिनेट पछि लाग्न लाग्दछ र प्रायः मानिसहरु द्वारा धीर-धीरे मृत्युको लागी देख्न सकिन्छ, जस्तै जीवन-धम्कीको चोट वा टर्मिनल रोगहरू।
त्यसोभए मृतक दर्शनहरू के हुन्? तिनीहरू कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ? के तिनीहरू डिज्नी दिमागहरू द्वारा उत्पादित छुटहरू छन्? रोगीहरूको प्रणालीमा ड्रग्स द्वारा उत्पादित ड्रेसहरू? वा आत्माहरूको दर्शन वास्तवमा तिनीहरूले के प्रकट हुन सक्थे: मृत प्रियजनहरूका स्वागत समिति जो अस्तित्वको अर्को विमानमा जीवनको लागि सजिलो सहज भएका छन्?
कार्ला विल्स ब्रान्डनले उनीहरूको पुस्तकमा यी प्रश्नहरूको जवाफ दिन प्रयास गर्छन्, "म एउटा अन्तिम हग म अघि जानु: रहस्य र मृत्युको दृश्य दृश्यहरूको अर्थ", जुन धेरै आधुनिक-दिनको खाताहरू समावेश छन्।
के तिनीहरू मस्तिष्क मस्तिष्कको सृजन हुन सक्थे - एक प्रकारको आत्म-प्रेरित पादरी मरने प्रक्रियालाई कम गर्न? यद्यपि यो वैज्ञानिक समुदायमा धेरै प्रस्तावित एक सिद्धान्त हो, विल्स ब्रान्डन सहमत छैन। "लेख्नका आगन्तुकहरूले अक्सर मरिसकेका आफन्तहरू मर्नु भएको व्यक्तिलाई सहयोग पुर्याउन आएका थिए।" "केही परिस्थितिहरूमा, मरिसकेका थिएनन् यी आगन्तुकहरू पहिले नै मरेको थियो।" अन्य शब्दहरुमा, मृत मस्तिष्क किन केवल मृतकहरूको दर्शनको उत्पादन गर्दछ, कि मर्नु भएको व्यक्ति जान्थे कि उनी मर्छन् वा होइन?
र औषधि को प्रभाव को बारे मा? "यी दर्शनहरू छन् जुन धेरै व्यक्तिहरू दबाइहरूमा छैनन् र धेरै सहज हुन्छन्" भनी विल्स ब्रान्डन लेख्छन्। "जो औषधिमा छन् तिनीहरू यी दर्शनहरू पनि रिपोर्ट गर्छन्, तर दर्शनहरू तिनीहरूसँग जस्तै छन् जसले दबाइहरूमा छैनन्।"
मृत्युबिन्दुका लागि उत्तम प्रमाण
हामी कहिलेकाहीँ यस्ता अनुभवहरू साँच्चिकै असामान्य हो कि होइन भनेर थाहा नहुन सक्छ - जुन हामी यस जीवनबाट पनि पुग्छौं। तर केहि मृत्युबिन्दु दर्शनहरुको एक पहलू हो जुन सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण छ कि यो विचारमा सबै भन्दा बढी प्रमाण बुझाउँछ र तिनीहरू "अर्को पक्ष" बाट आत्माहरूको वास्तविक भ्रमण हुन्। दुर्लभ अवसरोंमा, आत्मा संस्थाहरू मात्र मर्नुपरेको रोगी द्वारा देख्न सकिन्छ, तर उपस्थित हुनका साथीहरू, नातेदारहरू र अरूले पनि!
एक अनुसन्धान अनुसार फरवरी 1949मा मनोवैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि सोसाइटीको जर्नल संस्करणमा मृत्यु भएको छ, एक मृत्यु भएको महिला, हरित्री पैर्सन र तीन जना आफन्तहरु द्वारा कोठामा थिए।
डेरा जवान केटाको उपस्थितिमा दुई साक्षीहरूले स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो बेडमा आफ्नो आमाको मनोभाव देख्न थाले।
मृत्युबिन्दु दृश्यहरू कसरी मरिरहेका र उनीहरूको सम्बन्धी लाभ
चाहे मधुमेह दर्शन घटना हो वास्तविक हो वा होइन, यो व्यक्ति संलग्न व्यक्तिको लागि प्रायः फायदेमंद हुन्छ। "पुस्तकिंग भिजन" मा मेलिवर्न मोर्सले लेखेको छ कि आध्यात्मिक प्रकृतिको दर्शनहरूले रोगीलाई मर्नुपर्यो, उनीहरुलाई एहसास गर्न सक्छ कि उनीसँग अरुसँग साझा गर्न केहि लाग्दैन। साथै, यी दर्शनहरूलाई रोगीहरूमा मर्नुको भय डरलाग्दो रूपमा नाटकीय रूपले कम वा पूर्ण रूपमा हटाउनुहोस् र प्रायः आफन्तहरूलाई निको पार्छ।
कार्ला विल्स-ब्रान्डनले मृत्युदण्डको दर्शनले मृत्युको बारेमा हाम्रो समग्र मनोवृत्तिलाई परिवर्तन गर्न मद्दत गर्दछ। "आज धेरै जना मानिसहरु आफ्नै मृत्युदेखि डराउँछन् र प्रियजनहरू पारित गर्न कठिनाइमा छन्।" "यदि हामी जान्न सक्छौं कि मृत्यु डरलाग्दो छैन, सम्भवतः हामी जीवनभरि पूर्णतया जीवन बिताउन सक्षम हुनेछौं। मृत्यु जान्न अन्ततः हाम्रो डर-आधारित सामाजिक कठिनाइहरूको समाधान हुन सक्छ।"
जीवन जन्मनु अघि जीवन
रिमोट हेर्ने साथ प्रयोग कसरी गर्ने
के प्रायोजक मृत्युको दूतहरू हुन्?
के निबिरुको चलिरहेको छ?
म कसरी असामान्य विशेषज्ञ बन्न सक्छु?
समय यात्रीहरू: यात्राहरू विगतमा र भविष्यमा
पुनरावृत्ति को बुझन
दास: मेरो दादी, डाइच
चाँदको छेउमा के छ?
कालो जादू अभिवादन
यी असामान्य तस्वीरहरू तपाईंले कुरा देख्नुहुनेछ
1662 हार्टफोर्ड डच परीक्षणहरू
प्लैंकटन को परिभाषा बुझन
संशोधन शब्द र राय एक्सप्रेस गर्न को लागि वाक्यांश
10 जिम हेन्ड्रिक्स र कर्ट कोबिन बीच उल्लेखनीय समानताहरू
शीर्ष शीर्ष बारह ईंन्धन कुशल 2010 एसयूवी र क्रससोभर
पुरातत्व मा विशालकाय Antaeus को बारे मा
बालबालिकाका लागि उत्तम स्की रिसोर्ट्स
के इस्लाम शान्ति, सबमिशन, र परमेश्वरलाई समर्पणमा आधारित छ?
शीर्ष4सबै भन्दा कामुक कुरा देखाउने क्षण
कार्बन डाइऑक्साइड विषाणुको कारण
"विदेशी", लैरी शू द्वारा एक पूर्ण लम्बाई प्ले
कपाल को लंबाई र धर्म
कसरी सुकेको बाहिर शर्पी तय गर्नुहोस्
Çatalhöyük: जीवनमा टर्की 9,000 वर्ष अगा
भिजुअल एन्थ्रोपोलोजीको परिचय
टेलिभिजन र चलचित्रमा पाँच आम ल्याटिन स्टेरियोपिप्स
लिखित अंग्रेजी के छ?
स्खलन के हो?
संयुक्त राज्य अमेरिका मा दस्तावेज को इतिहास
तपाईंले गल्फ गोल्फ क्लब किन्नु अघि